गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्  !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्  !
फाल्गुन ३, २०७६ प्रदीप ज्ञवाली
कावा खाँदैमा उचाइमाकहाँ होइँदो रै’छ र उच्च ?भिर्दैमा उधारोको छिर्केमिर्के आस्कोटकहाँ भइँदो रै’छ र
हिमालझैँ शुभ्र, हिमनदीझैँ स्वच्छ ?
आकाशमै उडे पनि
भुइँतिरै फर्केका हुन्छन् गिद्धका नजर
आँधीजस्तो वेग हुँदैमा
कहाँ सोहोरिँदो रै’छ र आँगनको कसिङ्गर ?
सधैँ सिनोकै खोजीमा हुन्छन् गिद्धका दृष्टि
कसिसकेको पटुकीको सुर्केनी पासो फुकाएर
सुसेल्दै पिङमा झुल्न सिकाउँछन् गीतहरूले
आँखाबाट बगेको साउने झरी पुछेर
मंसिरमा तोरीबारी फुल्न सिकाउँछन् गीतहरुले
जीवनको गीतसिके भने सबैले
मृत्युको महाभोज कहाँ पाउनु ?
मुस्कानको लय सिके भने सबैले
परपीडाको धुन सुन्न कहाँ पाउनु ?
त्यसैले गिद्धहरु गीत गाउँदैनन् !
न छोर्तेनमाथि जगमगाइरहेका लुङ्दर
न त मन्दिरमा मगमगाइरहेको धूपबत्ती
न आमाले कानेताती गराइदिँदा
गुन्द्रीमा खिलखिलाइरहेको नानी
न त बिहानी घाममा झल्झलाइरहेको
पातमाथिको एक थोपा पानी
अहँ, देख्दैनन् तिनले
सिन्दूरले नुहाइरहेको कञ्चनजङ्घा
सपनाहरु बोकी हिँड्ने
श्रमजीवी कमिलाहरुको जन्ती र
जाडो छल्न बेंसीतिर बगिरहेका मालचराहरुको गङ्गा !
गिद्धहरू गीत गाउँदैनन् !
बस्, यौटै खोजी छ तिनको–
मृत्युले आग्लो लगाएका
आँखाका शून्य परेलीहरु ?
छातीभित्रका निस्तेज टुकीहरु ?
खै कहाँ भेटिएलान्–
जिन्दगीको सुवास नै बिर्साउने
महामृत्युका काला छायाहरु ?
हो, गिद्धहरु गीत गाउँदैनन् !
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १३:११
२५ सय वर्षअघिको आक्रोश
फाल्गुन ३, २०७६ रामचन्द्र श्रेष्ठ
आचार्य चतुरसेन (अगस्ट २६, १८९१–फेब्रुअरी २, १९६०) को बहुचर्चित क्लासिक हो– ‘वैशालीकी नगरवधू’ । ‘सोमनाथ’, ‘वयं रक्षाम्’ लगायत उत्कृष्ट आख्यानका लेखक उनले आधा शताब्दीको सिर्जनशील यात्रामा लगभग साढे चार सय कथा, बत्तीस उपन्यास, कैयौं नाटक र काव्य रचना गरे । चतुरसेनको स्मृति–दिवसमा ‘वैशालीकी नगरवधू’ माथिको समीक्षा प्रस्तुत छ ।
महिलाको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने जनपदलाई जति छिटो रगतमा डुबाइदिन सकिन्छ उत्ति नै बेस हुन्छ– यो २५ सय वर्षअघिको आक्रोश हो । जब आफूलाई जबरजस्ती नगरवधू बनाइन थालिएको थियो, अम्बपालीले यसरी आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन् । यो आक्रोश केवल मनमा कैद भएर बसेन । समयका अनेक उपक्रममा यो निस्तेज पनि भएन । आफ्ना सपनाको हत्या गरेर परम्परा र कानुनको आडमा नगरवधू बनाइएपछि अम्बपालीले वैशालीको पतनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिनन् ।
उसो त अम्बपालीलाई वैशालीका गणपति सुनन्दले सम्झाएका हुन्छन्, ‘सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिगत इच्छा तिलाञ्जली दिनुपर्छ ।’ सिंगो वैशाली अम्बपालीलाई नगरवधू बनाउने मुद्दामा विभाजित थियो । उनको अस्वीकृतिले वज्जीसंघको एकता नै संकटमा पर्थ्यो । त्यसैले सुनन्दले ‘व्यक्तिगत इच्छा’ को बलिदानी माग्छन् ।
२५ सय वर्षपछि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बन्नबाट रोक्न यस्तै–यस्तै तर्कहरू गरिएको थियो । पार्टीको एकता वा पार्टीको हितका लागि उनको योग्यताको बलिदान मागियो । र, फेरि पनि शिवमाया सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिगत इच्छा र सामर्थ्यको बलिदानी गर्न विवश पारिइन् । राजीनामा गर्दै गर्दा शिवमायाले कटु यथार्थ ओकलिन्— राज्यसत्ता भन्दा पितृसत्ता बलियो रहेछ । आखिर इतिहास दोहोरिनेरहेछ, फरक–फरक आवरणमा । उसो त हाम्रा वर्तमान कर्म र चिन्तनहरूले निकटदेखि सुदूर इतिहाससँग
साइनो राख्छन् ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको अन्त्यतिर राजनीतिका विविध आयाम बुझ्ने भोक चर्को थियो । भोक मेट्न अनेकन किताब पढिन्थ्यो । यसै क्रममा हात लागेको थियो आचार्य चतुरसेनको उपन्यास– ‘वैशालीकी नगरवधू ।’ तर, यो पढ्नु उति सजिलो थिएन । हिन्दी भाषा, त्यो पनि संस्कृत शब्दावलीले भरिपूर्ण । मोटाइ पनि उस्तै । लगभग तीन महिना घोटिएपछि उपन्यासको स्वाद महसुस भएको थियो । पछि चतुरसेनका कथाहरू पढ्न थालेपछि ‘वैशालीकी नगरवधू’ झनै सुस्वादिलो बन्दै गयो । जिन्दगीमा अक्सर यस्तै हुन्छ । पहिलो गाँसमा औधी स्वादिला लागेका वस्तुहरू बिस्तारै अरुचिमा बदलिन्छन् र घृणा गरिएका क्रमशः स्वादिला हुन्छन् । कैयौं मान्छे प्रिय ठान्दाठान्दै पराई भइसकेका हुन्छन् । कैयौं पराई थाहै नपाई आफन्त बन्छन् । जिन्दगी बेलाबेलामा रहस्यको ठूलो पोकोझैं लाग्छ । तर, रहस्यको ठूलो पोको त अम्बपालीको जन्म नै हो ।
‘वैशालीकी नगरवधू’ बुद्धको समयको कथा हो । उत्तर भारतमा केही बलिया राज्यहरू स्थापित भइसकेका हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा हो– वज्जी संघ । यो विदेह राज्य फुटेर बनेका लिच्छवी संघहरूको राज्य हो । वज्जीअन्तर्गत आठ कुल संग्लग्न छन् । वज्जी संघ गणतन्त्रात्मक राज्य हो, जहाँ राजाको पनि निर्वाचन हुन्छ । सभाले गर्ने निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । तर, त्यस्तो सभा वा राज्यसंयन्त्रमा सबै जाति र वर्गको पहुँच छैन । सामन्त, व्यापारीलगायतका कुलीनहरूको मात्रै पहुँच छ । वैशाली वज्जी संघको राजधानी हो । वैशालीमा एउटा अचम्मको कानुन छ— नगरको सबैभन्दा सुन्दर युवती कोही एक जनाको श्रीमती हुन पाउँदैन । सुन्दर युवतीलाई बिहे गरेर गृहस्थी जीवन बिताउने अधिकार छैन । उसलाई नगरवधू बनाइन्छ ।
दरबारको उपवनको रेखदेख गर्ने नायक महानामनले आँपको रूख (आम्रवृक्ष) मुनि एउटी सुन्दरी बालिका भेट्टाउँछ । सन्तानविहीन महानामन दम्पतीले त्यो बालिकालाई सन्तानको रूपमा अपनाउँछन् । आम्रवृक्षमुनि फेला परेको हुनाले नाम अम्बपाली (आम्रपालीको अप्रभंस) राखिन्छ । बालिका अति सुन्दर हुन्छे तर त्यही सुन्दरता नै उसको भविष्यको तगारो भएको हुन्छ । बालिका हुर्कंदै गएपछि नगरवधू बनाइन सकिने सम्भावनासँग डराएर महानामन दरबार छोडेर गाउँमा जान्छ । अम्बपाली ११ वर्ष पुग्दा उसकी आमाको निधन भइसकेको हुन्छ । महानामन वृद्ध र गरिब हुन्छ । गरिबीका कारण अम्बपालीका रहर पूरा गर्न नसक्ने भएपछि महानामन पुनः वैशाली फर्किन बाध्य हुन्छ । वैशालीमा उसको भेट साथी चन्द्रदेवको छोरा हर्षदेवसँग हुन्छ । उसले पुनः राजप्रासाद सेवामा अवसर पाउँछ ।
महानामनलाई जे डर थियो, त्यही भइछाड्छ । अम्बपालीलाई नगरवधू बनाइन्छ । अम्बपाली भर्खर–भर्खर हर्षदेवसँग प्रेममा परेकी थिई । उसका गृहस्थी जीवनका सपनामा पालुवा लाग्दै थिए । जबरजस्ती नगरवधू बनाइने भएपछि ऊ औधी आक्रोशित हुन्छे । सभा बस्छ । सभामा ९०२ जना सदस्य हुन्छन् । सामन्तपुत्र, व्यापारीलगायतका युवा भारदार हुन्छन् । उनीहरू बहस गरिरहेका हुन्छन् । लिच्छवीको कानुनको पालना गराउन उत्तेजित देखिन्छन् । छिन–छिनमा खुँडा र तरबार प्रदर्शन हुन्छ । माहोल उत्तेजित हुन्छ । यसैबीचमा महानामनको प्रवेश हुन्छ । उसलाई एक्लै देखेर सभा क्रोधित हुन्छ । तर, श्वेत परिधानमा अम्बपालीको प्रवेश हुन्छ । ऊ सभालाई सम्बोधन गर्छे र भन्छे, ‘यो तिमीहरूको धिक्कृत कानुन हो ।’ व्यापारको केन्द्र भएकाले वज्जी संघ समृद्ध हुन्छ । समृद्धि र शक्तिको केन्द्र वैशालीलाई कसैले पनि कुनै आक्षेप लगाउन सकेको हुँदैन । तर, समंद्ध गणराज्यको कानुनलाई एउटी अबला नारीले ‘धिक्कृत कानुन’ को उपमा दिन्छे । सभाको निन्दा गर्छे । खडा र तरबार फेरि चम्किन्छन् । तर, अम्बपालीले अडान कायम नै राख्छे । ‘नगरवधू’ को प्रावधानलाई उसले वज्जी संघको गौरवमा कलंक भएको बताउँछे । के प्रकृतिप्रदत्त सुन्दरता नै आफ्नो अपराध हो भन्ने सीधा तर कठिन प्रश्न तेर्स्याउँछे ।
आखिरमा तीनवटा सर्तमा मात्र नगरवधू बन्न तयार हुने बताउँछे । ऊ मृत्यु स्विकार्न तयार छे तर आफ्ना सर्तमा सम्झौता गर्न तयार छैन । ती तीन सर्त हुन्छन्— पहिलो, राजालाई बराबर दरबार, सम्पत्ति, मुद्रा र सुविधा प्राप्त होस् । दोस्रो, उसको महलको सुरक्षा कुनै किल्लाको जस्तो होस् । अर्थात्, उसको बेग्लै सेना होस् । तेस्रो, उसको आवासमा आवतजावत गर्ने अतिथिहरूको कुनै जाँच गरिनेछैन । सभाले तेस्रो सर्तमा कुनै कारणले जाँचपड्ताल गर्नुपरेमा एक साताअगाडि नै खबर गर्ने संशोधन गर्दै सबै सर्त स्वीकार गर्छ । सिंगो राज्यलाई आफ्ना सर्तहरूको बलमा दबाएर अम्बपाली नगरवधू बन्छे ।
राजनीति अनेक दृृश्य, अदृश्य खेल र समीकरणहरूले सञ्चालित हुन्छ । यिनै उपक्रममा राजनीतिले अनेकौं रहस्य सिर्जना गर्छ । मदन भण्डारीदेखि नारायणहिटी हत्याकाण्ड हाम्रा निकट इतिहासका रहस्य हुन् । उसो त निर्वाचनका परिणामहरू पनि कम रहस्यपूर्ण हुँदैनन् । ‘वैशालीकी नगरवधू’ राजनीतिमा सिर्जित हुने घात–प्रतिघात र अनेकौं रहस्यले भरिपूर्ण छ ।
वज्जीसँग टक्कर लिने समृद्ध राज्य छ मगध, जहाँका राजा छन्— बिम्बसार । बिम्बसारका पिताको समयमा त्यहाँ गोविन्द स्वामी नामक वेदपाठी ब्राह्मणथिए । उनले एक दिन सम्राट्लाई एक बालिका दिँदै उसको पालनपोषणको जिम्मा लिन आग्रह गरे । सम्राट्ले उक्त आग्रह स्वीकार गर्दै छोरा बिम्बसारसरह उनलाई छोरीको रूपमा पालनपोषण गर्ने वचन दिए । बालिकाको नाम मातंगी राखियो । गोविन्द स्वामीसँग अर्का एक शिष्य बालक पनि थिए, जसको नाम वर्षकार थियो । उनी कसका सन्तान हुन्, थाहा थिएन । बच्चा एघार वर्ष पुगेपछि गोविन्द स्वामीले सम्राट्लाई सुम्पिँदै राम्ररी शिक्षा–दीक्षा दिएर हुर्काउन र पछि महामात्य (महामन्त्री) बनाउन भन्छन् । स्वामीले कुनै पनि कारणले वर्षकार र मातंगीको बिहे नगराउनू भनेका हुन्छन् । तर, हुर्कंदै जाँदा वर्षकार र युवराज बिम्बसार दुवै मातंगीप्रति आकर्षित हुन्छन् । यस विषयमा उनीहरूको झगडा पनि हुन्छ । तर, लुकीछिपी मातंगीलाई भेट्न दुवैले छोड्दैनन् । यसैबीचमा मातंगी गर्भवती हुन्छिन् । त्यो गर्भ वर्षकार र बिम्बसारमा कसको हो भन्ने रहस्य मातंगीले खोल्दिनन् । बच्चा जन्मिएपछि वर्षकारले दासीमार्फत उक्त शिशु फाल्न लगाउँछ । फ्याँकिएको शिशुलाई महावैज्ञानिक सिद्ध शाम्बव्य काश्यपले भेट्टाउँछन् र पालनपोषण गर्छन् । उक्त शिशु पछि सोमप्रभको नामले परिचित हुन्छ । सोम तक्षशिलाबाट ज्ञान प्राप्त वीर, साहसी र कुशाग्र बुद्धिको हुन्छ । सम्राट्को निधनपछि बिम्बसार राजा हुन्छन् । मृत्युअगाडि उनले बिम्बसार र वर्षकारलाई सम्राट् र महामात्य बन्न आदेश दिन्छन् । एउटा गोप्य पत्र दिँदै बिम्बसारको राज्यारोहणको तीन वर्षपछि खोल्नू र त्यति नै बेला मातंगीको बिहे गर्नू भनी लेखेका हुन्छन् । पछि पत्र खोलिँदा रहस्य बाहिर आउँछ । त्यसमा लेखिएको हुन्छ– मातंगी वर्षकारकी बहिनी भएकाले बिहे हुँदैन ।
पत्र खोल्ने समयमा मातंगी फेरि गर्भवती हुन्छिन् । उनलाई वैशाली पठाइएको हुन्छ । उतै उनले गोप्य रूपमा एक कन्यालाई जन्म दिन्छिन् र स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किन्छिन् । कन्या वर्षकारको हुन्छ । जब पत्रले मातंगी र वर्षकारको सम्बन्धको रहस्य खोल्छ, उनी निकै निराश हुन्छिन् र राजसुविधा त्यागेर तपस्विनी बन्छिन् । पछि उनी आर्य मातंगीको नामले प्रसिद्ध हुन्छिन् ।
अम्बपालीमा केन्द्रित भए पनि ‘वैशालीकी नगरवधू’ अनेकौं उपकथामा उनिएको छ । तत्कालीन उत्तर–भारतको समग्र राजनीति यसमा प्रतिविम्बित छ । तत्कालीन राजनीतिको केन्द्रमा आर्यहरू छन् । आर्यहरूले राजनीतिमा हिंसालाई प्रशस्त स्थान दिएका छन् । राजनीतिमा शक्ति संघर्षमा अपनाइने अनेकौं दाउपेचले कथा भरिएको छ । आचार्यपाद काश्यपले कुण्डनी नामक सुन्दरीलाई विषकन्याको रूपमा हुर्काएका छन् । चम्पा आक्रमण–क्रममा मगध महामात्य वर्षकारको पक्षमा कुण्डनीलाई प्रयोग गरिन्छ । चम्पा जाने बेलामा सोमप्रभ र कुण्डनी असुरहरूको कब्जामा पर्छन् । तर, कुण्डनीले आफ्नो सुन्दरता र विषको बलमा असुरहरूको हत्या गर्छे । आचार्य वर्षकार रत्न व्यापारीको भेषमा चम्पामा घुस्छ । कुण्डनी उसको पुत्री बनेर राजाको दरबारमा छिर्छे । त्यहाँ पनि विषको बलमा राजाको हत्या गर्न सफल हुन्छे । आर्य राजनीति कुटिलता, हत्या र हिंसाले लतपतिएको हुन्छ । तथापि युद्धलाई जायज नै ठहर्‍याइन्छ ।
युद्धलाई वैधानस्करण गर्ने प्रयत्नमा एक प्रसंगमा आचार्य शाम्बव्य भन्छन्, ‘युद्ध जीवनको अपरिहार्य घटना हो । युद्ध मानव सभ्यताको इतिहास हो ।’ अर्को एउटा बलशाली राज्य छ— कोसल । कोसलका राजा प्रसेनजित अति नै यौनपिपासु हुन्छन् । उनले कपिलवस्तुका शाक्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका हुन्छन् । शाक्यहरूले छल गरेर दासीसँग बिहे गराइदिएका हुन्छन्, जसबाट विदुडभको जन्म हुन्छ । आफू दासीपुत्र भएको ज्ञात भएपछि विदुडभ आक्रोशित हुन्छ । किनभने ऊजस्ता वर्णसंकरलाई राज्यसत्तामा ठाउँ हुँदैन । त्यसैले ऊ शाक्य कुल नास गर्न उद्यत हुन्छ । ऊ आर्यहरूमाथि बदला लिने मनसायमा हुन्छ । प्रसेनजितसँगको बहसमा विदुडभ भन्छ, ‘आर्यहरूले घृणा गर्ने दासीपुत्र, वर्णसंकरहरूलाई हामी सार्वजनिक गराउनेछौं । हामी आर्यहरूको सम्पूर्ण अधिकार, सबै राज्य र सबै सत्ता खोस्नेछौं ।’
आचार्य चतुरसेनले विदुडभमार्फत आर्यको विरोधमा वर्णसंकर र दासहरूको पक्ष लिएका छन् । ‘वैशालीकी नगरवधू’ आर्य साहित्यको गह्रौं भारीले थिचिएर अव्यक्त रहेका वर्णसंकर र दासहरूको पक्षमा लेखिएको साहित्य हो । सन् १९४९ मा उपन्यासको भूमिकामा आचार्य चतुरसेनले इतिहासकारहरूले नदेखेको तर मिश्रित जातिले आर्यको धर्म, साहित्य, राजसत्ता र संस्कृतिमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रगतिशील संस्कृति उजागर गरेको स्विकारेका छन् । प्रसेनजितको सुरक्षा दिएका हुन्छन्— वीर बन्धुलले । लामो संघर्षपछि सोमप्रभले बन्धुलको हत्या गरेर विदुडभलाई राजा बनाउँछ ।
अम्बपालीको प्रथम प्रेमी हर्षदेव व्यापारीको भेषमा चर्चित हुन्छ । उसले वैशालीमाथि बदला लिने प्रण गरेको हुन्छ । उसले मगध सम्राट् बिम्बसार र अम्बपालीको भेट गराउँछ । अम्बपाली मगधको भावी सम्राट्की माता बन्ने सर्तमा बिम्बसारसँग प्रणयसम्बन्ध राख्न मञ्जुर हुन्छिन् ।
मगधले वैशालीमाथि आक्रमण गर्छ । आक्रमणको प्रतिरोधका लागि पूरा तयारी गरेर बसेको हुन्छ वैशाली । तर, वैशालीभित्रैबाट मगधलाई सहयोग मिलिरहेको हुन्छ । अम्बपालीको आवासगृहले गुप्त रूपमा मगधलाई सहयोग गर्छ । मगधको सैन्य नेतृत्व आर्य मातंगीका पुत्र सोमप्रभले गरेको हुन्छ । भीषण युद्ध हुन्छ । युद्धमा समयमा राजा बिम्बसार बेपत्ता हुन्छ । युद्धको खास उद्देश्य नगरवधूलाई राजमाता बनाउने हो भन्ने थाहा पाएपछि सोमले युद्ध अन्त्य गर्छ । सोमले सम्राट् बिम्बसारलाई पक्राउ गरी कैद गर्छ । पछि आर्या मातंगीले सबै रहस्य खोलिदिन्छिन् । थाहा लाग्छ, सोमप्रभ सम्राट् बिम्बसारको छोरा हुन्छ । अम्बपाली उसकी बहिनी हुन्छे । तर, अम्बपालीको पिता वर्षकार हुन्छ । यसरी उपन्यासको पूर्वार्द्धमा अम्बपालीको जन्मको रहस्य पटाक्षेप हुन्छ ।
भीषण युद्धको एक वर्षपछि गौतम बुद्ध वैशाली आउँछन् । वैशाली सुनसान हुन्छ । अम्बपालीको महलको दैलो बन्द भएको एक वर्ष भइसकेको हुन्छ । उनले गोप्य रूपमा बालकलाई जन्म दिन्छिन् । त्यो बालक बिम्बसारको पुत्र हुन्छ । बालक भावी मगध सम्राट्को रूपमा मगध पठाइन्छ । बुद्ध–आगमनको खबर सुन्नासाथ अम्बपाली बुद्धको दर्शन गर्न जान्छिन् । बुद्ध ८० वर्ष पुगिसकेका हुन्छन् । अम्बपालीले भोजनको निमन्त्रणा गर्छिन् । लिच्छवीहरूले पनि बुद्धलाई भोजनको निमन्त्रणा गर्छन् । बुद्धले अम्बपालीलाई भोजनका लागि आउने वचन दिइसकेको बताउँछन् । लिच्छवीहरूले फेरि एकपटक अम्बपालीसँग हार महसुस गर्छन् ।
आफ्नो विशाल महलमा बुद्ध र समस्त भिक्षुहरूलाई भोजन गराइसकेपछि अम्बपालीले बुद्धसँग कुनै भिक्षुको उत्तरीय (काँध ओढ्ने वस्त्र) माग्छिन् । भिक्षु आनन्दले दिन्छन् । अम्बपाली भित्र जान्छिन् । आउँदा उनले केवल उत्तरीय मात्र बेरेकी हुन्छिन् । न कुनै आभूषण, न कुनै वस्त्र । बुद्धसँग उनी प्रव्रज्या माग गर्छिन् । कुनै बेला आफ्नो रूप र यौवनले संसार जितेकी, धन, सम्पत्ति, सेना, कुनैमा कमी नभएकी अम्बपाली केवल भिक्षा मागिएको उत्तरीयमा बेरिएर बुद्धको शरणमा जान्छिन् । कथाको अन्तिममा थाहा लाग्छ, अम्बपालीलाई मौन प्रेम गर्ने सोमप्रभ भिक्षु भइसकेको हुन्छ ।
समकालीन राजनीतिमा अनेकौं उतारचढाव आइरहँदा आचार्य चतुरसेनको पुनः स्मरण हुन्छ । ‘वैशालीकी नगरवधू’ मार्फत उनले सामन्ती राजनीतिको अनकौं जालझेल चित्रण गरे । आधुनिक राजनीति पनि जालझेल, कपटभन्दा पर छैन । उसो त जिज्ञासाको हत्या उतिबेला पनि र अहिले पनि नाजायज ठहरिन्छ । एउटा सन्दर्भमा आचार्य शाम्बव्य सोमप्रभसँग भन्छन्, ‘राजनीतिमा अति कौतूहल जायज हुँदैन ।’ यही वाक्यले समकालीन नेपाली राजनीतिमा छाएको मौनताको बाक्लो बादल बुझ्न सघाउँछ । आखिर हाम्रो दाशता र मौनता पनि यसरी नै सिर्जना गरिएका त हुन् !
आचार्य चतुरसेनले उपन्यासलाई घटनाप्रधान बनाउँदा–बनाउँदै पनि कैयौं ठाउँमा जादुयी यथार्थवादको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । विषयलाई अतिशयोक्ति बनाउन पनि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । बुद्धको अन्तिम धर्मचक्र प्रवर्तनमा २ लाख मानिसको उपस्थिति र मगध–वैशाली लडाइँमा दस दिनमा ९६ लाख नरसंहारको आँकडा अपत्यारिलो लाग्छ । बुद्ध र महावीर जैनले तत्कालीन समाजको धर्म, संस्कृति र राजनीतिमा सुधारका लागि गरेको हस्तक्षेपको चित्रणले हाम्रो वर्तमान सभ्यता इतिहास पुरानो अनेकौं द्वन्द्वको प्रतिफल हो भनी स्विकार्न करै लाग्छ । बन्धुल श्रीमती रोहिणीको मुखबाट आचार्य चतुरसेनले दासप्रथाको विरोध गरेका छन् ।
‘वैशालीकी नगरवधू’ ले हामीलाई हाम्रो भूगोलको सुदूर विगत प्रतिविम्बित गर्छ भने त्यसको आलोकमा वर्तमान राजनीतिका उतारचढाव, घात–प्रतिघात र रहस्य महसुस गर्न सघाउँछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १२:५३